Hadda waa mid aad u fudud in la hubiyo in Kies Samsung ku PC waxaa ku xiran Galaxy S4 ay Samsung ku bixisaa shabakad guriga Wi-Fi. Geedi socodka oo faahfaahsan ayaa lagu sharaxayaa sida under:
1. PC iyo telefoonka Mobile waa in lagugu xiro u Home Wi-Fi.
2. Kies waa in lagu dhejiyaa kombuutarka
3. User Sidoo kale waa in la hubiyo in Kies saxaarad Wakiilka ayaa sidoo kale socda kombuutarka. Wixii Windows 7 waa la xaqiijin karo adigoo riixaya Ctrl + Alt + Del furaha ka dibna doorto Tababaraha hawsha. Under-socodka ah user awood u yeelan doonaan in ay arkaan barnaamijka la magac la mid ah. Wixii Windows 8 user ka arki kartaa barnaamijka adigoo raacaya tababaraha> geedi socodka hawsha Jidka. Xaqiijinta waa in la sameeyo by in la hubiyo in barnaamijka KiesTrayAgetnt.exe waxaa socda bar habka iyo haddii taasi aysan muuqan PC waa in la billaabeen oo mar kale isku dayay.
Dejinta PC for Kies badan Wi-Fi
Geedi socodka labada daaqadaha 7 iyo 8 ayaa lagaga wada hadlay sidii hoos oo user ka dooran kartaa kuwa sida ay u doonayaan,
1. Cayrin ilaa daahfurka network on PC si ay u bilaabaan
a. On badisay 7 jidka in la raaco waa gacanta guddi> network iyo internet> Network iyo Sharing Center> beddel goobaha sare Wadaag:
b. Shabakadda Wi-Fi kaas oo PC ayaa ku xiran waa in ay leeyihiin noqda on Network daahfurka soo xulay. Waxa kale oo ay ku xiran tahay Mudanayaasha isticmaala iyo goobaha ah ee Wi Fi:
2. Internet qaybsiga naafanimo
a. Halkan jidka in uu yahay in la raaco waa guddi gacanta> network iyo xarunta qaybsiga> goobaha isbedel adabtarada> xaq gujinaya ka adabtarada Wi-Fi iyo xulashada guryaha:
b. Bogga xiga in booda user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in tab qaybsiga la riixi iyo ikhtiyaarka ah "U ogolow kale isticmaala shabakadda in ay ku xidhmaan dhex computer this" internet "waa naafo ah ama aan la xarriiqay:
3. Brannmur ka reeban
a. Jidka arrintan la xiriira in ay tahay in la raaco waa gacanta guddi> System iyo ammaanka> daaqadaha brannmur> ogolaan iyo app ama feature dhex brannmur daaqadaha.
b. The button goob isbedel ka dibna in la weeraray iyo kombuyuutarrada gacanta wireless ay tahay in la sugayay oo ku yaalliin dhamaadka. The Home / Shaqada iyo ama checkbox gaarka loo leeyahay waa in la sax ah si loo hubiyo in app Kies wuxuu ula xiriiri karaa iyada oo brannmur. Button ayaa OK waa ka dibna in la sii adkeeyey inuu ka tago.
4. adeegyada Windows
a. Jidka in la raaco waa gacanta guddi> nidaamka iyo ammaanka> qalab Maamulka> Services. Adeegyada sida daahfurka SSDP iyo uPnP oo ciidankii qalabka magacaabay waa in la socda. Haddii la mid ah uusan dhici user markaas u baahan yahay in la hubiyo in adeegyada waa qumman yihiin riixi iyo bilaabay.
b. Adeegga qaybsiga internet waa in la naafo haddii ordaya sidii tallaabo labaad ee habkan.
1. Network daahfurka horumarka ee PC
a. Jidka waa isku mid sida in daaqadaha 7 ie gacanta guddi> network iyo internet> xarunta qaybsiga network> Change Advanced Sharing Settings:
b. On xidhan goobaha isticmaalaha ayaa Wi-Fi kaas oo PC ayaa ku xiran waa in ay leeyihiin hab daahfurka network u soo jeestay,
a. Control Panel> network iyo qaybsiga xarunta> goobaha Change adabtarada
b. The adabtarada Wi-Fi waa in la xaq u riixi si loo hubiyo in guryaha waxaa la soo xulay. On suuqa kala cusub tab qaybsiga markaas waa in la riixi iyo ikhtiyaarka ah "U ogolow kale isticmaala shabakadda in ay ku xidhmaan dhex computer tan" waa in la naafada ah.
3. Brannmur goobaha laga reebo
a. Control guddi> nidaamka iyo ammaanka> brannmur Windows> ogolaan iyo app ama feature marayo waddada brannmur daaqadaha waa in la qaatay:
b. Next ah tab goobaha isbedel waa in la riixi iyo user fiiriyaa waa xaq hoose halkaas oo kombuyuutarrada gacanta wireless ku qoran yihiin. Sanduuqa ayaa hoos imaanayso gaarka loo leeyahay waa in la hubiyaa:
a. Control guddi> nidaamka iyo ammaanka> qalab Maamulka> adeegyada. Adeegyada daahfurka SSDP iyo adeegga martida Device uPnP waa in la socda iyo haddii kiiska waa in ay lid markaas adeegyadan waa in ay noqdaan xaq u riixi iyo bilaabay. The qaybsiga internet waxaa sidoo kale in la naafo haddii la shaqeeyo:
Xiriirka S4 in Kies via Wi-Fi
a. User wuxuu u baahan yahay in ay soo booqdaan guriga> goobaha> xiriir ka dibna tubbada ikhtiyaarka ah Kies via Wi-Fi. Haddii fariin digniin ah oo jirtey ayaa user markaas u baahan yahay in la hubiyo in badhanka OK waxaa ku dhuftay in arrintan la xiriira. Kies ayaa via Wi-Fi bilaabi doonaan in ay iskaan u computer iyo haddii aysan taasi dhicin si toos ah user ku dhuftay karaan ikhtiyaarka ah qalabka Scan aad u bilowdo hawsha. Qodobka ugu muhiimsan ee ay u aragto in uu yahay inta lagu jiro wajiga iskaanka telefoonka marna waa in lagugu xiro PC ka dhex cable USB ah. Marka PC ayaa laga helay magaca la soo saaro waa in la hubiyo in habka xidhiidhka ka bilaabayso. Furaha baas ee ay barnaamijka ay tahay in la galay in kombuutarka in la dhiso xiriir ah. Waa geedi socod lagu onetime in ay tahay in la raaco:
b. Geedi socodka ayaa u dhamaatay iyo hadda user waa in ay sugaan in ay ha labada qalabka xirmaan kasta oo kale:
File Transfer ka Samsung in pc isticmaalaya Wondershare MobileGo via Wi-Fi
Wondershare MobileGo waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican in la si gaar ah loogu talagalay dadka oo dhan, kuwa ka fiirsan Kies sida qashin ah ama xoogaa yar oo qashinka iyo in ay aad u sax ah inta badan dadka qabaa si la mid ah. Waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in dadka loo soo dajiyo Kies ka dibna waxa uu bilaabo la siiyo dhibaatooyin gaar ahaan Mac xitaa haddii Quraankan lagu soo uninstalled. Waxaa jira laba nooc taasoo ay taageereyso barnaamijka ka mid ah hore waa xidhiidhka ka dhex cable USB oo midba kan kale waa Kies ku xira in ka badan Wi-Fi. Arintaan ayaa halkan laga wada xaajoon doona si aad u hesho xallinayo arrintan, waayo, dadka kuwaas oo raadinaya caawimo arrintan la xiriira ee:
Waxaa jira qaababka qaarkood:
Maamulka content Mobile
Xilli hore ka sifooyinka muhiimka ah gundhig
1. PC iyo qalabka waa in la xiran isla network Wi-Fi sida ay tahay mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee arrintan la xiriira.
2. Laga Device Samsung ee user ay u baahan tahay si aad u hesho a app MobileGo si loo hubiyo in file apk la soo bixi oo lagu rakibay qalab ah.
3. Run Wondershare Mobilego kombuutarka.
4. user ayaa sidoo kale loo baahan yahay si loo hubiyo in app ee lagu rakibay si telefoonka ayaa sidoo kale karoos in la furo iyo button waa in la sii adkeeyey. Code QR u muuqda in shaashadda PC waa in la marsiiyey adigoo riixaya badhanka OK. Qalabka ayaa hadda la xiran.
5. Qalabka la soo bandhigi doonaa furmo suuqa ugu weyn marka uu ku xiran:
> Resource > Samsung > Transfer Faylal ay ka Samsung in PC Isticmaalka Kies via WiFi